China Ọhụrụ Gallic Nlụpụta na Factory | Nongchuanggang
Garlicdị galik ndị a kacha ahụkarị nwere cloves 10 (ma ọ bụ akụkụ) nwere akpụkpọ ọcha. Dị ka a na-achị, obere klọọkụ ahụ siri ike karịa uto ahụ! Enwere ike iri galik ma ọ bụ sie ya. Raw garlic na-enye ekpomeekpo siri ike na-atọ ụtọ, ebe nri na-eme ka ekpomeekpo dị ụtọ. Garlic na-ere ọkụ ngwa ngwa, ya mere kpachara anya mgbe ị na-eghe ma ọ bụ na-agagharị. Enwere ike iji ya na akwukwo nri na nri anụ, ofe, tinye, gbanye fries, braises na stews, ma ọ bụ tinye mkpo na-achaghị acha na pan na anụ ma ọ bụ inine.
Enwere ike iji galik maka salad mgbatị, mgbe ị na-eme salad ahụ mgbe ọ gbachara ya ma hapụ ya ma ọ bụ mee ya ka ọ ghaa galik nke isonye na ya, mgbe emechara ya ga-eme salad, ya na galik mara mma, na mgbakwunye na nke a, ndị mmadụ galiki esi anụ ma ọ bụ anụ ndị ọzọ anụ Efrata itinye, nwekwara ike tinye nri ego nke garlic.
A pụkwara ịtụtụrụ galik na-eri nri n'oge nkịtị, edepụtara na galik dị ọhụrụ, ndị mmadụ nwere ike ịsachachaa mgbe ị na-asachasị galik ọhụrụ, ihe ụtọ na ihendori, n'ime usoro nke aka ya iji mee ka ọ dị ụtọ na galik na-atọ ụtọ. n'ime nnu nnu nnu, nwere ike iri afọ niile, na mgbakwunye na ụzọ ndị a, a ga-eghekwa garlic ka ọ rie, nwekwara ike sie mmiri ị drinkụọ, ọ bụ maka nri mmadụ, na ahụ ike, na-egbochi ọrịa.
Garlic bụ osisi okike sara mbara nke na-ahụ maka ọgwụ nje, galik nwere ihe dị ka 2% allicin, allicin nwere mmetụta dị ike bactericidal, ọ nwere ike meghachi omume na cystine nke nje bacteria iji mepụta mmiri ozuzo kristal mgbe ọ banyere n'ime ahụ mmadụ, bibie ìgwè sulfhydryl na sọlfọ ahụ. amino otu dị mkpa maka nje, nke mere na metabolism nke nje bacteria na-egosi ọgba aghara, si otú enweghị ike mụta nwa na-eto.
Nnyocha egosiwo na galik raw nwere mmetụta nke imeziwanye nnabata nke glucose na ndị mmadụ nkịtị, ọ nwekwara ike ịkwalite secretion nke insulin ma nwekwuo ọrụ glucose na sel anụ ahụ, iji belata ogo glucose ọbara.
Iri galik dị ọcha kwa ụbọchị nwere ike ibelata mmeghachi omume nfụkasị ahụ, ọkachasị ndị nke mgbanwe okpomọkụ na-akpata. Zọ kachasị mma iji mee nke a bụ ịmalite iri galik raw na izu ole na ole tupu oge nfụkasị.
Dị Ọhụrụ, Osisi ohuru
.Dị Garlic, Nkịtị ọcha & ọcha ọcha
Tidị Cultivation Organic
Ibu (n'arọ) 0,05
Nọmba nlereanya F01
Nkwakọ ngwaahịa nkọwa Mbukota na 10kg / katọn, 10kg / ntupu akpa, 20kg / ntupu akpa, ma ọ bụ na-esonụ ahịa 'chọrọ
Ọkwa N’ụwa nile
Okwu ọnụahịa FOB
Nke gara aga: Oyi kpọnwụrụ akpọnwụ